Tamin'ny 1900, nanamafy ny sehatry ny fizik ny manam-pahaizana alemà Max Max Max, ka nahatsikaritra fa ny angovo dia tsy mikoriana eny am-pandehanana fa alefa ao anaty fonosana diso. Planck dia namorona fepetra iray mba haminaniany ity tranga ity, ary ny fahitana azy dia namarana ny laharam-pahamehan'ny olona maro ankehitriny izay miantso ny "fizik ara-klasika" ho fanamafisana ny fianarana ny fizika physique .
Na teo aza ny fahatsapana fa efa fantatra tany amin'ny sehatry ny physique avokoa izy rehetra dia mbola nisy olana iray izay nanindrona physicists nandritra ny am-polo taonany: Tsy azon'izy ireo ny voka-pifidianana mahagaga izay azon'izy ireo avy amin'ny fanamafisam-peo izay mihazona ny hafanam-pandrenesana rehetra mitroka azy, raha tsy izany fantatra amin'ny anarana hoe mainty hoditra .
Andramo ny azon'ireo mpahay siansa ka tsy afaka manazava ny vokatry ny fampiasana ny kilasy ara-batana.
Max Planck dia teraka tany Kiel, Allemagne, tamin'ny 23 aprily 1858, ary nihevitra ny ho lasa pianista matihanina talohan'ny nanodidian'ny mpampianatra ny siansa. Nankany amin'ny Oniversiten'i Berlin sy ny Oniversiten'i Munich i Planck.
Taorian'ny fandaniana nandritra ny efa-taona ho mpampianatra mpiara-miasa amin'ny teôlôjika tao amin'ny Oniversiten'i Kiel, dia nifindra tany amin'ny Oniversiten'i Berlin i Planck, ary lasa profesora feno tamin'ny taona 1892 izy.
Ny fitiavan-tanindraan'i Planck dia ny thermodynamika. Raha nikaroka ny taratra mainty hoditra izy dia nihazakazaka ihany koa tamin'ny olana mitovy amin'ny mpahay siansa hafa. Ny kilasy klasika dia tsy afaka nanazava ny vokatra hitany.
Tamin'ny taona 1900, Planck, 42 ​​taona, dia nahita fikajiana iray izay nanazava ny vokatr'ireo fitsapana ireo: E = Nhf, miaraka amin'ny E = angovo, N = integer, h = constant, f = hafahafa. Raha hamaritra io fihetsika io dia tonga i Planck ny hany (h), izay fantatra ankehitriny amin'ny hoe " tsy miova ny planck ."
Ny ampahany mahavariana amin'ny fahitan'i Planck dia ny hoe angovo, izay toa miparitaka amin'ny elanelam-pahavelomana, dia mivoaka ao anaty fonosana kely antsoina hoe "quanta".
Io teoraly vaovao momba ny angovo io dia nanova ny fomba fiasan'ny fiangonan'i Albert Einstein momba ny fiovana.
Tamin'ny voalohany, ny fahitana ny fahitana an'i Planck dia tsy tena takatra.
Tsy tamin'ny voalohany i Einstein sy ireo olon-kafa no nampiasa ny hevitr'ity sehatra ity mba hanatsarana ny fandrosoana ara-batana fa ny tontolon'ny revolisiona dia nahatsikaritra azy.
Tamin'ny taona 1918, ny vondrom-piarahamonina siantifika dia nahatsikaritra tsara ny maha-zava-dehibe ny asan'i Planck ary nanome azy ny loka Nobel amin'ny Fizika.
Nanohy nitarika fikarohana izy ary nanampy bebe kokoa ny fandrosoana ara-batana, saingy tsy nisy na inona na inona raha oharina tamin'ny taona 1900 izay.
Loza eo amin'ny fiainany manokana
Raha nahavita be tamin'ny fiainany matihanina izy, dia voamariky ny loza ny fiainan'i Planck. Maty tamin'ny 1909 ny vadiny voalohany, Karl, zokiny indrindra, nandritra ny Ady Lehibe I. Ny zazavavy roa, Margarete sy Emma, ​​dia maty tamin'ny fotoana nahaterahana. Ary i Erwin, faralahiny faralahy, dia voarohirohy tamin'ny teti-pivoarana tamin'ny volana Jolay izay namono an'i Hitler ary nahantona.
Nanambady i Planck tamin'ny 1911 ary nanan-janaka lahy, Hermann.
Nanapa-kevitra ny hijanona tany Alemaina nandritra ny Ady Lehibe II i Planck. Nampiasa ny lakolosy izy, ka niezaka ny hijoro ho mpahay siansa jiosy, nefa tsy dia nahomby. Nandritra ny hetsi-panoherana, dia niala i Planck tamin'ny maha filohan'ny Kaiser Wilhelm Institute azy tamin'ny taona 1937.
Tamin'ny taona 1944, nisy baomba nipoaka nandritra ny fanafihana an'habakabaka Allied dia namely ny tranony, nanimba ny fananany maro, anisan'izany ny kahieny siantifika.
Maty tamin'ny 4 Oktobra 1947 i Max Planck tamin'ny faha 89 taonany.
The Genocide Rwanda
Saint Ambrose avy any Milan: Rain'ny Fiangonana
Maty maty i Queen Victoria
I am ein Berliner-The Jelly Donut Myth
Ahoana no ahafantaranao hoe iza no mpilalao golf amin'ny baolina kitra?
Mianara momba ny tena fiainana Mpamorona pizza
Ny fandinihana ny alchemy anatiny ao amin'ny Taoism
PKb Famaritana ao amin'ny Chemistry
Manangana ny Java Applet voalohany
Novena ho any Saint Benedict
Finoana, Fanantenana ary Fitiavana: 1 Korintiana 13:13
Top 10 Jazz Musicians Top Jazz
Fomba fiomanana amin'ny famakiana volo
Fahatakarana ny foto-kevitra ara-sosialy "Life Perspective Perspective"
Inona no atao hoe dingana roa?
Ny Caral Supe na ny kolikoly Norte Chico any Amerika Atsimo
Fomba hitahirizana an-tsoratra ny anarana ao amin'ny Genealogy